Ukutsala iMagnetic Down Kitchen kitet ngeMagnet - WOWOW
Ikhaya / IFaucets yasekhitshini / Thatha iipompu zekhitshi / WOWOW Eyona nto ifanelekileyo yokuTsala itepu yasekhitshini ngeMagnet Chrome
I-WOWOW Best Tyhila isitya ekhitshini esineMagnet Chrome
I-Magnetic Docking: Itephu isebenzisa umazibuthe onamandla ukukrazula isitshizi sasekhitshini endaweni ukuze ihlale ibambekile kwaye ayihexi ngokuhamba kwexesha njengezinye iimpompo zasekhitshini.
Iindlela ezi-3 zaManzi: TSHAYELA/ PHUMZA/ TSHELA. Kwimowudi yokutshayela, amanzi afana ne-blade enamandla anamandla okuhlanjululwa okanye ukugungxula izitya ezimdaka kunye nokutshona ngokukhawuleza kwaye kunamandla, alungele kakhulu uxinzelelo lwamanzi aphantsi. Imowudi yomlambo egudileyo ilungele ukugcwalisa iimbiza ngokukhawuleza. Imowudi yokutshiza yoxinzelelo oluphezulu yokuhlamba izitya kunye neesinki.
Umgangatho ophezulu: i-stainless steel spout, i-zinc alloy body, i-core core iqinisekisa ukuhlala, i-drip-free kunye ne-lead-free, i-80 cm (ubude bokukhupha) i-anti-explosion yokukhupha i-hose (ubude obu-1.5 m ubude), imigca yokubonelela nge-inshurensi ye-tucai (0.5 m indawo nganye, umnatha wentsimbi engenakutyiwa)
Tsala-ngaphandle iFaucet yeKhitshi yesitshizi ene-Escutcheon: i-plate ye-deck yokuzikhethela kwi-1 okanye i-3 yokufakela umngxuma, akufuneki ukhathazeke malunga neengxaki zomngxuma ombi; Ubude beSpout: 16.1 '', Ukufikelela kwi-Spout: 7.8'', Ubude beDekhi: 9.6"; Umphezulu we-Nickel oxutyiweyo unokuxhathisa umkrwelo wemihla ngemihla, ungonakalisi
Iwaranti yeminyaka emi-5, ukuBuyiswa kweentsuku ezingama-90, Inkxaso yoMthengi kwangexesha, ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga neempompo ze-lever enye yeesinki zasekhitshini, nceda uqhagamshelane nathi nge-ID yakho ye-oda
Ikhitshi faucet isiphatho esinye 2311901C
Ngaba udiniwe kukufikelela okulinganiselweyo kwesikhuselo sekhitshi lakho elinye? Ungathandabuzi, kwaye ngokukhawuleza uthenge ikhitshi lesincedisi sekhitshi laseWOWOW. Xa kukho ikhitshi lesiphatho esinye se-WOWOW unokwandisa uluhlu lwakho ngokulula, kwaye uya kukwazi ukufikelela nakweyiphi na indawo ngaphakathi okanye ejikeleze ikhitshi lakho ekhitshini. Ngokukodwa xa ikhitshi lakho lixhotywe nge-sink ezimbini zekhitshi, ikhitshi lesibini lekitshi lase-WOWOW liza liluncedo kakhulu. Ngentloko yokutshiza eguquguqukayo ye-360 degrees, unowona mguquko uyifunayo. Akusayi kubakho ndawo yashiyekileyo ongenakufikelela kunye nekhitshi lokuphela kwetafile ekhayeni yeWOWOW.
Ngokudibana kwemagnethi, unokubetha ngokulula isitshixu sekhitshi kwimagnethi enamandla. Ngale ndlela isitshizi sakho sasekhitshini siya kuhlala sisendaweni kwaye singahambi ixesha njengayo nayiphi na esinye isitovu ekhitshini. Ikhitshi elilodwa le WWOW ekhitshiweyo isiphatho esinye asoze sikuphoxe. Ukusebenza okubonakalayo kuya kuthintela intloko yakho yesitshizi ekuweni okanye ekujikeni ngeenxa zonke. Inqaku lesibalo somatshini ophathwayo wekhitshi le-WOWOW sele livavanywe ngaphezulu kwe-10,000. Imagneti eyakhelwe ngaphakathi yakwazi ukumelana nazo zonke ezi mvavanyo, kwaye emva kwamaxesha ayi-10,000 yakwazi ukulungisa intloko yokutshiza kakuhle nangokuchanekileyo emva kokuyikhupha. Uqinisekisiwe ngomgangatho oqinileyo oza kusebenza kakuhle kwiindawo zekhaya kunye nezorhwebo.
Ikhitshi isitya esinye isiphatho ngemisebenzi eyahlukeneyo
Isiphatho sesikhitshi esinye isiphatho seWOWOW ngaphandle kokubonelela ngemisebenzi eyahlukeneyo. Ngemisebenzi emithathu yamanzi unokukhetha umsebenzi othile wamanzi okuncedayo emsebenzini wekhitshi owenzayo. Ungawukhetha kakuhle umsebenzi owufunayo ngeqhosha kwindawo yokutshiza entlokweni yokuphelisa isibambo esinye sekhitshi. Unokukhetha imowudi eqhelekileyo yemijelo yokugcwalisa izimbiza zakho ngamanzi, okanye imo yokutshiza yokucoca imifuno yakho. Indlela ekhethekileyo ye-aqua-blade ineempawu ezinamandla zokuhlamba izitya zakho ezingcolileyo kunye nekhitshi ekhitshini ngokukhawuleza nangokufanelekileyo.
Ukuxhasa uqoqosho ngetyala lamanzi, iindawo ezihlanganisiweyo ze-Neoperl ABS zigcina malunga ne-50% yamanzi. Awuyi kuqaphela umthamo wamanzi ancitshisiweyo ngenxa yolu lwazi lutsha. Kodwa ubuncinci unokuqinisekiswa ukuba awusebenzisi amanzi. I-aerator ingashenxiswa ngokulula ngengqekembe yokucoca le nxalenye yeefenet ekhitshini, okanye endaweni yoko. Isiphatho esinye sepheki ekhitshini siyakusebenza kakuhle ngaphandle kwe-aerator ye-Neoperl ABS, ke ukuba awuzithembi ukuyisebenzisa, unokuyisusa kwikhitshi lakho lodwa kwisitetti esinye.
Umgangatho ophezulu wesiphatho sesikhitshini esinye
Umgangatho owufumanayo ngemali yakho unomdla. Uninzi lwabathengi bebengalindelanga ukuba umgangatho uphathelene nexabiso lalesi sikhitshana sesiphatho sesibane esinye. Ke ngoko sinokuthi ngokunyani ngaphandle kokuqhayisa ukuba ikhitshi lethu lesikhitshini isiphatho esinye sikunika elona xabiso liphezulu lemali onokufumana ngayo kwintengiso. Ngokukhawuleza uqaphela umgangatho wale khitshi isitofu esinye isiphatho xa uyibambile. Ubunzima bepheki ekhitshini libonisa intsimbi eqinileyo eyenziwe ngayo.
Umzimba wombhobho wekhitshi wenziwe nge-alloy zinc ukuqinisekisa ukuzinza okude, kunye nesiseko sekhitshi esenziwe ngobhedu. Ngaphandle koko, isitshisi setipu yasekhitshini senziwe ngentsimbi engenanto ukuze sikunikeze ngesixhobo esingashukumiyo kunye nesisimahla ekhitshini. Ukukhupha umbhobho kwenziwa ngezinto ezinamandla zokulwa nokuqhushumba, kwaye imigca yokuhambisa amanzi ye-tucai-egubungele i-inshurensi yehlabathi-ibonisa umphezulu wentsimbi. Ayisiyonto i-WOWOW inabathengi abaninzi behlabathi abahlala bethembekile ngonaphakade, kuba baya kubuya bethenga iipompo zasekhitshini ze-WOWOW kunye nokulungiswa kwekhitshi elandelayo.
Ufakelo olulula lokufakela ikhitshi isitya esinye
Xa ukhetha ikhitshi lesikhitshana esinye isiphatho sokudibanisa nekhitshi lakho elisandula ukwenziwa, uninzi lwamaxesha elinokulifakelwa umzuzwana ngumgcini wekhitshi lakho ngaphandle kwendleko ezongezelelweyo. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukuphucula ikhitshi lakho ngephedi enye yasekhitshini, abanye abantu bayaziyekisa ukumiswa njengoko belindele ukuba kuya kufuneka kubizwe amapayjama ekubizeni ukuba afake lo mbhobho wasekhitshi kunye nekhitshi. Nangona kunjalo, i-WOWOW yenze ukuba kube lula ukufaka le khitshi lesiphatho esinye isibambo ukuze ukwazi ukuzenzela ngokwakho. Akunyanzelekanga ukuba uqeshe ipayipi ebiza kakhulu kwaye kwimizuzu nje engama-30 unokutshintsha isitya sakho esitsha sasemkhitshini kunye nesikhitshana esitsha somatshini isitya esinye seWOWOW.
Abathengi bayamangaliswa ngenxa yokuba lula kokufakelwa isiphatho esinye sekhitshi. I-Wowow ikwazile ukwenza ukufakelwa okulula, ngendlela apho nabani na angakwazi ukufaka le khitshi isitya isiphatho esinye kwimizuzu nje engama-30. Isikhenkcisi ekhitshini senziwe ngendlela eyahluka ngokungafaniyo nakweyiphi na ifenitshala ekhitshini. Iya ngokungatsho ukuba zonke izinto zokufakelwa zifakiwe kunye nekhitshi lokuphela kwetafile ekhitshini.
Isixhobo esisebenzayo esisebenza ngendleko zekhitshi
Isiphatho esinye sekhitshi ephethe i-WOWOW sixhotywe ngokuzikhethela isitayile sokuhlohla kufakelo le-1- okanye le-3. Ngale ndlela awuyi kushiywa nangayiphi na imingxunya emibi kwikhompyuter yakho ekhompyutheni emva kokuyifaka. Yonke into iya kufakwa ngokudibeneyo ukuze ikunike ii -esthetics ezifanelekileyo. Ukufakela ikhitshi lokuphetha isitya esinye ngokwakho, ikhithi yokufaka ifakiwe kunye nemveliso yakho, kunye nevidiyo yokufaka, ukufakwa kuya kwenziwa ngokuqwayiza kwamehlo.
Njengombane wepheki yasekhitshini, enye ye-WOWOW ikunika umgangatho ongenaxabiso kunye nembonakalo yale mihla, uye wafumana isitya esinye ekhitshini ekhitshini. Le ikhitshi isitofu esinye isiphatho ngokuqinisekileyo lilona xabiso lilungileyo lemali oya kuyifumana kwintengiso. Ngexesha lesiqinisekiso seminyaka emi-5 kunye neentsuku ezingama-90 zokubuyiselwa imali-ungathenga isuti yetouch ekhayeni enye ye-WOWOW ngaphandle komngcipheko. Ke ulinde ntoni?
Izibonelelo zekhitshi lokukhupha isitya esinye kwindawo engezantsi:
Magnetic tsala intloko yokutshiza
Ukufikelela kuma-360 degrees
Yenziwe ngomgangatho ophezulu wesinyithi
I-SKU: 2311901C iindidi: Thatha iipompu zekhitshi, IFaucets yasekhitshini tags: Ikhitshi yokuKhangela ekhitshini, Indawo yokuchasa i-Spainless, Yenziwe ngentsimbi eshayinayo
21.7 x 11.2 x 2.8 intshi
Iindlela ezintathu: Indlela yokutshayela / imo yokusasaza / indlela yokutshiza